गुलाबी: जब ब्यायर व्यवसाय छ Martech Zone
गुलाबी: जब ब्यायर ब्यायर छ
सोमवार, जुन 1, 2009 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
जब मेरी १ year वर्षीया छोरी हातमा भिक्टोरिया सीक्रेट ब्याग लिएर घर आई म लगभग स्ट्रोकको थिए। म कत्ति डरलाग्दो बुबा हुनुपर्दछ र मेरो छोरीको किनबेच गर्ने बानीलाई अझ राम्ररी निगरानी गर्नुपर्दछ भन्ने बारेमा यस पोष्टमा सबै टिप्पणीहरूको म स्वागत गर्दछु।
इमान्दारीताका साथ, मैले सोचें कि उनी धेरै, धेरै वर्षको लागि भिक्टोरिया सीक्रेटमा किनमेल गर्ने कुनै कारणहरू छन्। तिमीलाई थाहा छ ... म मरे पछि
मेरा सबै छोरीहरूका साथीहरूले अहिले समान स्टाइलिश आउटफिटहरू लगाइरहेका छन् ... लेबल गुलाबी तिनीहरूको नितम्ब पार। मैले महसुस गरे कि यो एक नयाँ ब्राण्ड हो, प्यारा नामले जवान युवतीहरूलाई आकर्षित गर्ने। बाहिरबाट जान्छ कि म सही छु, तर मलाई यो थाँहा थिएन कि भिक्टोरिया सेक्रेट यसको पछाडि थियो। भिक्टोरिया सीक्रेट सबै संग बाहिर जाँदै छ गुलाबी लाइन - एक गुलाबी वेबसाइटको साथ, गुलाबीको कलेजिएट लाइन, एक सामाजिक नेटवर्क भनिन्छ गुलाबी राष्ट्र - कि तपाईं संग प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक अवश्य पनि, संगीत, डाउनलोडहरू र एक टी-शर्ट डिजाइनर।
म बुझ्न सक्दछु कि भिक्टोरिया सीक्रेटले यसको संग्रहहरू विस्तार गर्न र विभिन्न जनसांख्यिकीय समूहहरूमा पुग्न चाहान्छ, तर युवा किशोरकिशोरीहरूमा पुग्दा घरको नजिकै पुग्छ। राम्रो मित्र एडम सानोको रूपमा (इंडियानापोलिस मोबाइल मार्केटिंग) ठ्याक्कै भने,
गुलाबी भिक्टोरिया सीक्रेटको लागि प्रवेशद्वार औषधि जस्तो देखिन्छ युवा युवतीहरूलाई धेरै पुरानो युगमा उनीहरूको ब्रान्डमा हुक गर्न।
मेरो निराशाको लागि धेरै, भिक्टोरिया सीक्रेटले स्पष्ट रूपमा युवा किशोरहरुलाई एक नयाँ बजार अवसरको रूपमा पहिचान गरेको छ। लुगाहरू प्रतिद्वंद्वी एबरक्रोम्बी र फिच र होलिस्टर भन्दा बढी सस्तो छन् ... र यो देखिन्छ किशोरहरू खर्च ट्रिमिंग गर्दैछ सबैलाई जस्तै।
व्यक्तिगत रूपमा, म चाहन्छु कि उत्पाद लाइन मेरो १ year वर्ष पुरानोको लागि धेरै महँगो थियो।
ब्रान्ड पूर्णता मरेको छ
यो तपाईंको कम्पनीलाई उल्टो मोड्ने समय हो
माफ गर्नुहोस्, मँ भन्न सक्दिन कि तपाई के सुन्न चाहानुहुन्छ, मैले १ 17 बर्ष पछि विवाह गरेको थिएँ। मलाई थाहा छ यो महिला / बच्चा हुन कस्तो हुन्छ। यो केटीहरूको लागि एकदम कठिन समय हो, अचानक सम्पूर्ण विश्वले उनीहरूलाई हेरिरहेको छ, र तिनीहरू केटीहरू होइनन्। मेरो मात्र सल्लाह भनेको यो निश्चित गर्नुहोस् कि उनलाई थाहा छ कि तपाईं उनलाई कती माया गर्नुहुन्छ र उनको लागि त्यहाँ हुनुहुन्छ - जे भए पनि - र उनलाई चुनौतीपूर्ण कार्यहरू र जिम्मेवारीहरू लिनको लागि धेरै अवसरहरू प्रदान गर्दछ ताकि ऊ हुर्कदै गएकोमा काम गर्न सक्दछ। निश्चित गर्नुहोस् कि उनीलाई थाहा छ कि केटाहरूले राम्रो र सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नु उचित छ, र त्यहाँ खस्दा उनलाई समात्नुहोस्। (के यो ग्रीटिंग कार्ड जस्तो देखिन्छ? माफ गर्नुहोस्) जहाँसम्म पिनके, मैले याद गरे कि काममा केही युवतीहरू केवल गुलाबी प्रकारको व्यवसाय ईमेलहरू पठाउन सुरु गरे, अनौंठो - सम्बन्धित? र अब म बुढो भएको छु, मँ सहमत छु, म चाहन्छु कि युवतीको यौनिकरणको मार्केटिंग यति लोकप्रिय थिएन - वा स्वीकार्य थिएन।
तपाईं मेरो लागि एउटा कुराको स्पष्टिकरण गर्नमा मद्दत गर्नुहुन्छ र यही कारणले कि धेरै केटीहरूले उनीहरूको बुट्टाहरूमा पिन्क शब्द राख्छन्। अब मलाई थाहा भयो! मलाई शिक्षा दिन र मलाई चारा दिनको लागि धन्यबाद यदि मेरो 8 बर्षेली छोरीले कहिले पिनकवेयरका लागि सोध्यो। हुन गइरहेको छैन (अहिलेको लागि हो)।